Customized Garden Scissors Portable Pruner abakhiqizi abavela eChina | Chan Kee
Izikele zezilwane ezifuywayo
I-Bandage Trauma Scissors
Amaphrojekthi we-OEM ne-ODM amukelwa
I-Chan Kee Stainless Steel Scissors Scissors Pruners Garden Pruning Bonsai Shears Manufacturer
Ama-Hot Selling Pruners I-Garden Scissors I-Pruning Shears Ithuluzi Lokunquma Ithuluzi lase-China Umkhiqizi
Uthango Lokuthena Engadini Ukusika Izikele Izikele Zezingadi Amasecateurs
Ikhaya > Imikhiqizo > Izikele Zengadi
Thumela OKUFUNILE MANJE Thumela OKUFUNILE MANJE
I-Wholesale Garden Scissors Outdoor Portable Isayizi Encane futhi kulula ukuyiphatha I-Pruner uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.U-Chan Kee ufingqa amaphutha emikhiqizweni edlule, futhi iqhubeka ithuthukisa. Imininingwane ye-Wholesale Garden Scissors Outdoor Portable Usayizi Omncane futhi kulula ukuwuphatha iPruner ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Inkampani ye-Ying Sense Scissors yakhe izinkundla zokucobelelana ngolwazi zesimanje kanye nemigqa yokuhlangana phakathi neminyaka edlule, eklanyelwe ngokuyinhloko ukuthuthukisa nokukhiqiza zonke izinhlobo zezikele nommese.
I-Ying Sense Scissors ikusiza ukuthi udizayine futhi ukhiqize imikhiqizo ngokuya ngemininingwane noma imidwebo yakho. Ezinye izinsiza ezenziwe ngezifiso nazo ziyatholakala njengokuphrinta kwe-logo, nokupakishwa okwenziwe ngokwezifiso.
Isistimu yokulawula ikhwalithi yomkhiqizo ngokuqinile.
Imibuzo Evame Ukubuzwa mayelana nefekthri yesikelo
Ithini imigomo yokulethwa?
I-FOB, EXW, CIF, CFR ingamukeleka.
Yiziphi izinhlobo zesikele owazi kahle?
Sikhethekile ekukhiqizeni izikele zengadi, izikele zokuthunga, izikele zasekhishini, izikele zobuhle, izikele zezingane zabafundi basehhovisi, izikele zezinwele, izikele ezisebenza ngezindlela eziningi, izikele zezilwane ezifuywayo, izikele zasendlini, njll.
Uyawanikeza amasampula futhi yimalini?
Yebo, singanikeza amasampula futhi ngokuvamile kumahhala. Kuqoqwa impahla kuphela. Izobuyiswa ngemva kwe-oda. Amasampuli angalunga ezinsukwini ezingu-1~2.
Ungakwazi yini ukuhlela ukuthunyelwa kwe-FBA?
Yebo, singahlela ukudiliva e-Amazon ukuze kuthunyelwe i-FBA.
Ungakwazi yini ukukhiqiza Imikhiqizo ye-OEM?
Yebo, imikhiqizo ye-ODM/OEM idume kakhulu enkampanini yethu. Uma uneminye imibuzo, xhumana nathi ngezindlela ezingezansi ngoKhetho lwakho.
Isungulwe ngo-1994, i-Ying Sense scissors Industrial Limited ingelinye labakhiqizi abahamba phambili emhlabeni, abasebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izinhlobo eziningi zesikelo, okuhlanganisa isikelo sasendlini, isikere sasehhovisi, isikere sezinwele, isikere sasengadini, isikere sasekhishini, isikere somthungi, isikelo sokuhlinzwa nokunye. Stainless steel scissor njll. Ngenxa yethimba lethu eliqinile lokuthuthukisa umkhiqizo kanye nethimba elihle kakhulu lokulawula ikhwalithi, kanye nethimba lokukhiqiza elichwepheshile lisenza sihluke kwabanye abakhiqizi embonini. Inkampani yesikere ye-Ying Sense yakhe izinkundla zokucobelelana ngolwazi zesimanje kanye nemigqa yokuhlangana phakathi neminyaka edlule, eklanyelwe ngokuyinhloko ukuthuthukisa nokukhiqiza zonke izinhlobo zezikele. Ngomgomo othi “Ikhasimende Kuqala” kanye “Nekhwalithi Nokudala”ukukhiqiza umkhiqizo ofana kangcono nomklamo wekhasimende. Amaphrojekthi we-OEM ne-ODM amukelwa. I-Ying Sense ikusiza ukuthi udizayine futhi ukhiqize imikhiqizo ngokuya ngemininingwane noma imidwebo yakho. Ezinye izinsiza ezenziwe ngezifiso nazo ziyatholakala njengokuphrinta kwe-logo, nokupakishwa okwenziwe ngokwezifiso. Izikele ze-Ying Sense zithemba ukuthi nawe ungakhula futhi uthuthuke emakethe yomhlaba wonke.
isikelo engadini pruningshear
Copyright © 1994 Guangzhou Chan Kee Industry Co., Ltd. - www.scissorfactory.com Wonke Amalungelo Agodliwe.